Wena uya kusindiswa | Apg29
Xa uyamamkela uYesu Kwenzeka ukuba imimangaliso omnye. Kuya kusindiswa - oko kukuthi basindiswe.
Kukho izinto ezikhe imizekelo yabantu abaye baba ebandleni bonke ubomi bakhe, kodwa bengenalo nofifi njani ukuze basindiswe. Ngoko ke, simele kwakhona agxininise ukuba igcinwe ngokufumana uYesu Kristu ngokobuqu. Akukho enye indlela. Ngayo xa uyamamkela uYesu usindiso indawo ebomini bakho.
Apho, kanye phaya, kanye ngoko, mna wasindiswa yaye ubomi bam iinguqu kwaye andinakuze kuba ngumntu omnye!
Ukufika ebandleni Yomoya phambi kweqonga sikwisiqingatha lasekhohlo izitulo kwi kwesitulo yokuqala ndiguqa amadolo am kubantu eziliqela ngeenxa zonke kum. Ndikhumbula kakuhle, oku kwenzeka kwindawo ethile. Namhlanje, ibandla wakhiwa kodwa ndisakwazi ukuchaza apho ndawo ndaweni ukuba waguqa ngamadolo am.
Johnny, umfundisi ulutsha entsha, waguqa ecaleni kwam ngoxa kwakukho nabanye Bengeenxa zonke kum, waza wathi kum:
- Ingaba wena ukuba ube?
Ndaba isuntswana nonplussed yi lo mbuzo, kodwa ekubeni ayizange isetyenziswe thandazani ngoko ke waphendula buntlonirha kwaye andiqondi;
- Hayi, andikho.
- Xa senza oku, wathi Jonny. I cela ngaphambi kokuba buza. Kuloo mthandazo kuthatha uyamamkela uYesu basindiswe.
Oku, ndacinga ndamgocagoca okulungileyo, kodwa nje ngaphambi koko sasizibuza, ndacinga, "mhlawumbi oku kuyinto esibhekene yonke loo nto, kodwa ke oko kuvela kakuhle." Abantu Bengeenxa zonke kum babeka izandla zabo phezu umva wam emagxeni am, ndaza bemba phantsi ubuso wam ndiwubeke ezandleni zam nxamnye IPEW eligugileyo, amfusa, wathandaza Jonny phambi kwam mna wabuza ukuba:
- Yesu, Ndiyemka, ndibuye ndize kuni ngoku.
- Yesu, ndimzisa kuni ngoku!
- Yesu, ndiya kumvuma njengoko iNkosi yam!
- Ndicinga ukuba bafa ngokufa ngenxa yezono zam.
- Ndiyakholwa ukuba uThixo wamvusa wena kwabafileyo!
- Sixolele bonke ubugwenxa bam!
- Ndiyabulela uYesu ukuba ngoku undisindisile!
- Ndiyabulela uYesu ukuba ngoku ekukuxoleleni zonke izono zam!
- Siyabulela ukuba Ngoku ungumntwana kaThixo!
Andibonanga iingelosi okanye naziphi na ezinye imibono, okanye sive naziphi na amazwi, kodwa emva koko waphefumla waza wacinga:
- Yhuu, ngoku kwenziwa!
Inyaniso kukuba usindiso ndawo ngoko nangoko xa Ndafumana ophilayo uYesu Kristu ebomini bam.
Xa ndithetha ngesi siganeko abantu, Ndidla ngokubaxelela ukuba akukho ibandla lasindisa kum, okanye nayiphi na imfundiso, akukho umfundisi okanye ezinye abantu, kodwa uMsindisi ophilileyo, uYesu Kristu iNkosi!
Esi siganeko Ndithi encwadini yam "The obude Night", kunye neenkcukacha ngakumbi encwadini yam zeVoti "I engafunwayo". Kuya kuba ngo-2020.
An ngaphantsi kwenzeka
Apha ngasentla, ndinixelele indlela wasinda. I wasinda xa bamkela uYesu waza waba ubomi bam.
Kodwa ndandingazi enkulu yeBhayibhile, engazange ndiyazi kangaka ngoYesu okanye indlela esebenza ngayo kubomi bomKristu, kodwa ndandisazi ngandlel 'ukuba kwafuneka uYesu. Yiloo nto wamthabatha ngaloo.
Ukuba wamkela uYesu, ngoko wayengazange akwazi ukusindiswa. Kwakungayi ngokwenene yayibalulekile ukuba ndandikhe kakhulu eBhayibhileni neyaziwayo kuzo zonke iinkalo lamaKristu ubomi wayesebenza kodwa ukuba andiyi bezamkele uYesu xa wayengazange akwazi ukusindiswa. Cwangcisa omiyo awe ngoko uYesu.
sidinga uJesu You
Nokuba umntu walukile, nokuba ngaba izenzo icawa kunye neeseti ubomi kakhulu ulilungisa, kuba ukuba awufuni ukuba uYesu, ngoko wabeka into engento. Ufuna uYesu. Cwangcisa ukuze uya kusindiswa.
Xa uyamamkela uYesu Kwenzeka ukuba imimangaliso omnye. Kuya kusindiswa - oko kukuthi basindiswe. Siya kuphinda azalwe ngokutsha - sisidalwa esitsha, omnye afumane zonke izono zakhe zixolelwe, ufumana ubomi obungunaphakade, nawe ube ngumntwana kaThixo, omnye uba elilungisa, ummi wasezulwini, ufumana igama lakhe ebhaliweyo encwadini yobomi ezulwini, njalo-njalo.
Oku kwenziwa izinto ezininzi ezinkulu ukuze amamkele uYesu. Ukuba ukhetha ukwamkela uYesu, kodwa awuka nje ecaweni ngokungathi kukho ezimbaxa, naxa kwakwenziwe yezi imimangaliso kuluhlu.
Ngoko ke kufuneka ukwamkela uYesu. Loko uya kusindiswa. IBhayibhile ithetha okuninzi malunga nokufumana uYesu. Enye isingise ndiyithandayo Yohane 1:12. Ithi:
Ke bonke abamamkelayo wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo, abo ke bakholwayo kwigama lakhe.
Ikubeka kucace ukuba kufuneka amamkele uYesu. Kwaye bonke abo bamkela uYesu singabantwana bakaThixo. Ayenzi nxamnye noYesu, ngoko asingomntwana kaThixo. Ngoko ke kufuneka ukuba wamkele uYesu ukuze ube ngumntwana kaThixo.
Xa ndafumana uYesu, ndaba ungumntwana kaThixo. Ngaphambili, nto nje apho. Imela nokuba kukuwa noYesu ukuba ngaba ungumntwana kaThixo na okanye hayi.
Waqonda ukuba kubalulekile ukuba
I wasinda xa ndafumana uYesu, yaye ukususela kwasekuqaleni ndaqonda indlela ebalulekileyo. Ngenxa yoko, mna njalo ukuthetha ngoYesu wayesoloko xa awayezingqinela kubo ngenxa yabantu.
Kwathi xa ndadibana labantu abathi bangamaKristu kunye lilungu lecawe, kodwa ndandisoloko bedidekile abasabela ngayo xa baqalisa ukuthetha ngemfuneko ukwamkela uYesu.
Baqonda ukuba eyona nto athetha ngayo. Isizathu bona abacacelwanga oku ngenxa yokuba asindisa yaye amaKristu ngenxa yokuba kakuhle, okanye baxelelwa ukuba kufuneka bathathe nxamnye noYesu ukuze babe ngamaKristu.
Ukuze ube into umele amkele oko
Ngaloo ndlela kuyanceda ukuba ecaweni, okanye athi ungumKristu, kodwa kufuneka wena ukwamkela umntu ophilayo kukaYesu Kristu. Wena nto ude uyalwa ufumene oku.
Ukuba ufumana imoto, okanye ibhayisekile, kufuneka wamkele oku ngaphambili unayo. Ngendlela efanayo ke noYesu. Ukuba une uYesu, kufuneka kuqala ukuba umamkele. Kwaye musa ukwamkela uYesu, ke wena akuyi asindiswe.
IBhayibhile ifundisa ukuba usindiswe kufuneka uyamamkela uYesu. Kuyinto kuphela abo bamamkeleyo uYesu ngubani igcinwa.
IBhayibhile ithi kwiindawo eziliqela ukuba amamkele uYesu. Le vesi nje sifunda uthi kuyo. Ithi xa uyamamkela uYesu, ungumntwana kaThixo.
Oku kuthetha ukuba akukho wamamkela uYesu, wena akunguye ungumntwana kaThixo. singabantwana bakaThixo kuphela abo baye bamkela uYesu.
Bonke ke abantwana bakaThixo. Kuyinto kuphela abo baye bamkela uYesu.
Xa uYesu Akufika kuloo ndawo, wakhangela phezulu waza wathi kuyo: "Zakeyu, khawuleza uhle;. Ngokuba namhlanje ndiya ndimele ukuhlale endlwini yakho" UZakeyu Wakhawuleza phantsi wamamkela ngobubele, bevuya.
Naphi na apho uYesu weza wathabatha abantu ngakuye. Kwaye abo bamkela naye basinda kwaye izono zabo.
Wase base yakhwela emthini bamkela uYesu. Kwaye uthi wamamkela ngayo uvuyo.
UYesu wathi kuye: "Namhlanje kufike usindiso kule ndlu, ngokokuba naye engunyana ka-Abraham.
Emva uZakeyu wamkela uYesu njengoko uYesu wangqina ngaye waza wathi wasindiswa ngoku.
Wase wasinda xa wamkela uYesu. Ngokufanayo, uya kusindiswa xa ufumana uYesu.
Onke amadoda nisindiswe. Kuyinto kuphela abo bamamkeleyo uYesu ngubani igcinwa.
Ngayo xa ufumana umntu ophilayo kukaYesu Krestu uya kusindiswa. Kubalulekile ukugxininisa ukuba kuphela nguYesu uMhlanguli.
Akunto oko nguYesu uMhlanguli. Usindiso endaweni ngoko nangoko xa ufumana uYesu njenge Nkosi ubomi babo.
Yiyo kuphela yena akukho mntu wumbi, akukho okunye elisindisa.
Akukho ecaweni okanye ibandla uMhlanguli.
Asinto ubhaptizo elisindisa.
Asikuko ukuba nidle isidlo seNkosi losindiso.
Asinto le ukufunda iBhayibhile ukuze usindiso.
Asinto umthandazo elisindisa.
Kodwa nguYesu Kristu ngubani asindisa!
Wena ecaweni kuba usindisiwe!
Wena ke ngokwakho ukuba babhaptizwe ngenxa yokuba usindisiwe.
Wena uthathe uMthendeleko ngenxa yokuba usindisiwe.
Wena siyakucela ngenxa yokuba usindisiwe.
Ufunda iBhayibhile ngenxa yokuba usindisiwe.
Ngaba ubona umahluko? Ukuba wenze zonke ezo zinto ngenxa yokuba asindiswe, kungekhona ukuze basindiswe. Awukwazi indawo into kunye noYesu Kristu. Nguye umsindisi kuphela, yaye oko kuye kufuneka avume ukuze basindiswe.
Unako ukuhlala njengoko asindiswe, unako ukuthandaza imithandazo ekunene kwaye aziphathe zonqulo engcwele, kodwa enaningamkelanga zona Yesu, nina asindiswe. Oku kuphela xa uthatha kuYesu uya kusindiswa!
Waba Qaphela ukuba ukuxelela
Ukususela mna wasinda, ndiye gcinani kunene ukuba ukuxelela abantu ukuba nabo baya kusindiswa.
Bona kusindiswa ngokwamkela uYesu Kristu.
Ke bonke abamamkelayo (uYesu), wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo, abo ke bakholwayo kwigama lakhe. (Yohane 1:12).
Le vesi ngomnye isingise oyithandayo. Swi uthi kufuneka ukwamkela uYesu Kristu. Xa usenjenjalo, wena ube ngumntwana kaThixo. Ngamanye amazwi, abantwana bakaThixo "kusindiswa," "azalwe kwakhona", "reverse" okanye "ubomi obungunaphakade".
Mna ngokwam wasindiswa ngokwamkela uYesu Kristu. Kwakungekho ibandla endiyifumene, okanye inkolo, kodwa uThixo ophilileyo uNyana, uYesu Kristu.
Kwahamba ke Ndaguqa kwi kwesitulo yokuqala kwiCawa Yomoya e Ljungby. Abanye wabeka izandla zakhe phezu kwam noLutsha Pastor Johnny Karlman emlonyeni i xikhongelo xa mina. Ndacela ukuba eliphezulu ngomlomo wam, yaye ngaloo ndlela ndafumana uYesu Kristu. Ngoko nangoko, I wasinda kunye nobomi bam siguqulwe.
Ndakhe ndaya nge ngakumbi yaye mna ngenxa ummangaliso leyo mmangaliso mkhulu ukuba ukhona banokuba yinxalenye. Le phezu inkulu kuxa umntu saphule igcinwa kwaye ukwamkela uYesu Kristu. Akukho phantsi omkhulu. Yeyona imimangaliso emikhulu ekhoyo.
ngoko weza uYesu eYeriko ahamba esixekweni. Kwaye nanko, kukho indoda egama uZakeyu, yaye induna kwi ngamasiko, yaye isisityebi. Yayifuna ukumbona uYesu, kodwa akaba nako ngenxa yendimbane, ngokuba ngesithomo yayimfutshane ngesithomo. Emva koko ke babaleka phambili yakhwela emthini womthombe ukuze imbone, kuba uYesu uyeza ngaloo ndlela. Xa uYesu Akufika kuloo ndawo, wakhangela phezulu waza wathi kuyo: "Zakeyu, khawuleza uhle;. Ngokuba namhlanje ndiya ndimele ukuhlale endlwini yakho" UZakeyu Wakhawuleza phantsi wamamkela ngobubele, bevuya. Wonke umntu akubona oko wambombozela enomsindo: "Uye ethatyathwe kwindoda engumoni." Kodwa uZakeyu wema apho, wathi kuyo iNkosi: ". Nkosi, nesiqingatha izinto endinazo, ndisinika amahlwempu; ndingafanelana ndinalo nabani baqhathiwe, ndiya kumnika emva izihlandlo ezine" UYesu wathi kuye: " Le mini kufike usindiso kule ndlu, ngokokuba naye engunyana ka-Abraham. Kuba uNyana woMntu weza kufuna nokusindisa oko kulahlekileyo "(Luka 19: 1-10)..
Eli candelo edumileyo ojongana mbuthi werhafu uZakeyu usindiso. Ndikhetha ukuveza izinto ezimbalwa ukusuka kwisicatshulwa ukuba ndenze ngqindilili.
Wase wasinda xa wamkela uYesu
Ithi kumbhalo ukuba uZakeyu wafumana uYesu. Bafumene uYesu ngamaxesha okubhalwa kweBhayibhile. Ngoko ke akukho nto ke ukuba siye safumanisa kutsha nje kwixa elidlulileyo. Apha Wase ngoko kusindiswa, kwaye ubomi bakhe waza waba.
Kwathi ngokwenene into xa wamkela uYesu. Ngoko kwakungekho isiko engenanto kwaye umphefumlo wakhe efanayo ngaphambili. Hayi, ukuba wayetshintshile. Oku wababonisa xa wayefuna ukunika imali emva amahlwempu pay izihlandlo ezine ukuba eyakhohlisa nabani.
Ukwamkela uYesu a uguqulelo
Ngoko ke akunakwenzeka ukuba sithi ngoku ndikunonelele uYesu asindiswe, uze baphila ubomi ngokuqhelekileyo kwakhona shame and amoyise. Hayi, ukuba ukwamkela uYesu Kristu inguquko. Kukho indalo ngexesha omiyi siguqulwe. Umntu lo yena uphila ongayekelelanga ukwenza ubomi bakhe ngenxa yesono, inkohliso, nangokunqula izithixo.
Oku kubonakala phezu umntu, ukuba usindisiwe. UYesu wabona ngokucacileyo uZakeyu ukuba zaguqulelwa kunye basindiswe. UYesu wathabatha yokuguqula uZakeyu kaThixo njengomzekelo abantu abayibona njengento. Ibonisa ukuba usindiswe okanye hayi. Wena kuqhubeka ke ngoko ukuba baphile ubomi bakho ihlazo kunye nokuthotywa.
UZakeyu wacelwa ukuba bangxame phantsi amamkele uYesu. Kufuneka silindele ukufumana uYesu. Ngenye imini ukuze okunene kuba kusemva kwexesha. Hayi, nimthabathe ngoxa kukho ixesha. Ngaba njengoko uZakeyu: Khawuleza ukwamkela uYesu.
Yeyona uvuyo uJesu
Wafumana uYesu ngovuyo! Ndiyayithanda loo gama. Akuyi uyadika ukwamkela uYesu. Endingazanga ndibone umntu ongatshatanga ukwamkela uYesu asentlungwini. Bekusoloko kukho yamkholisa. Ukongeza, kuya kubakho uvuyo ezulwini xa umntu baguquke baze ukwamkela uYesu Kristu baze basindiswe. Kananjalo kukholelwa uvuyo phakathi bakowenu phantsi apha emhlabeni xa umntu aze asindiswe.
UThixo wadala indoda ukuba nobudlelane naye
UThixo wadala umntu ekuqaleni. Wadala uAdam noEva waza waba nobudlelane nabo eParadisi.
Indoda bawela esonweni
Kodwa emva koko kwenzeke ayikholeleki. Man umva kuThixo bahamba ngendlela yabo.
Abantu akasafuni ukuhamba nobudlelwane noThixo. Yiyo le nto leyo shame.
Ngenxa yesono ukuba uAdam noEva baphulukana kwaye bagxothwa kwiparadesi ngenxa yokuba waye- ukuba sibe nobudlelwane noThixo.
Kodwa ukuba nje uAdam noEva bonile. Ngaphandle kwalo, wonke umntu ukwenzile. Nawe.
Ngenxa yokuba bonke abantu bonile, bona meko efanayo njengoko uAdam noEva. Bona ilahlekile bagxothwa eParadisi.
UThixo uthanda umntu
Kodwa uThixo wayebathanda abantu kangangokuba akazange afune ukuba zilahleke.
UThixo wayefuna ukulondoloza umntu akwambuyisa emva paradesi.
UThixo wathumela uJesu ukuba nezwe
Kodwa kwakukho indlela mnye kuphela uThixo ukusindisa umntu. Kwafuneka ukuthumela wakhe okuphela kwamzeleyo, uYesu Kristu kwihlabathi.
KukaYesu emnqamlezweni, ukufa nokuvuka
UYesu wabethwa, aphathwe kakubi, akhubeke namakhakakhaka-jize. Yena ke ebethelelwe emnqamlezweni waza wafa.
UYesu wawulalisa engcwabeni, kodwa uThixo wamvusa kwabafileyo, emva kokuba wayefile iintsuku ezintathu.
UYesu yanyuselwa emazulwini, yahlala ndawonye etroneni noThixo. Ukusuka apho, uYesu uza kubuya.
Yonke into ilungele kukusindisa
Ngoku uThixo wenza yonke into ngokucacileyo kukusindisa. Konke ekufuneka uyenze ukuze ukwamkela uYesu Kristu.
Xa ufumana uYesu uya kusindiswa kwaye ufumane yobudlelane noThixo kwakhona.
Kwaye ngenye imini ufika ekhaya ezulwini - iparadesi - nto leyo ngoku vula kuwe kwakhona.
ukuba usindiswe njani?
Ngoku ukuba ufuna ukuba basindiswe - basindiswe - ngoko umele amamkele uYesu. Yeyona nto kuphela ekufuneka uyenze ngenxa yokuba uThixo wenza yonke into ecacileyo wena phezu kuyimfuneko emnqamlezweni ukuba basindiswe - basindiswe.
Yabona, ndiya (Yesu) ndimi emnyango ndinkqonkqoza. Ukuba uthe umntu waliva izwi lam, waluvula ucango, ndongena kuye, ndidle naye, naye adle nam. (ISityhi 3:20).
Le vesi elimangalisayo iSityhilelo isahluko emithathu ivesi 20, abaninzi igcinwe kwi.
Kuyinto uYesu ngokwakhe lowo othatha inyathelo knock emnyango inhliziyo yakho. Kodwa nguwe oza kuvula emnyango kuphela. Ngaba niza ukuvula ucango uYesu yaye naye?
UYesu anxibe ucango waphumela phezu ngamandla. Kufuneka ngokuzithandela uvule wena kuYesu. Kwaye xa ntoni, amanyathelo kaYesu kungene kuwe. Emva koko ke uya kusindiswa, enixolele, iinguqu kwaye nizalwe ngokutsha. An indalo emangalisayo kuloo ndawo kuni.
Ke kuwe ubudlelwane kunye nobudlelwane kunye abaphilileyo uvukile uYesu Kristu. Yeyona ubomi emangalisayo. IBhayibhile ithi 'ukugcina ukutya. " Kukho umfanekiso ophambili yoluntu. Uyakwazi ukuba nobudlelwane noThixo ophilileyo noNyana. Kwaye uyakwazi ukuqhubela ukuba uyamamkela.
- Ngaba namamkelayo uKristu Yesu? Ukuba andenzanga nto, kutheni ungenzi nto namhlanje. Buza umthandazo wam kucetyisiwe ngasezantsi elikhulu emlonyeni wakho, wakholwa ngentliziyo yakho - ke ithatha usindiso kuwe ngayo. Yeyona inkulu ukuba wakha banokuba yinxalenye.
Xa uyamamkela uYesu iNkosi yakho, ngoko ke uYesu ngokwakhe uzayo kwaye ithatha up yokuhlala kwakhe ngawe!
Indlela ukwamkela uYesu
Yabona, Ndimi emnyango ndinkqonkqoza. Ukuba uthe umntu waliva izwi lam, waluvula ucango, ndongena kuye, ndidle naye, naye adle nam.
Ngayo xa uyamamkela uYesu umcele ukuba kungene kuwe njengoko iNkosi wakho uya kusindiswa. Waza uYesu osindisayo kwi kuwe yaye uya kusindiswa, uzelwe ngokutsha kwaye usisidalwa esitsha!
UYesu uza kuphila kuwe
kunye noKristu ngokholo baya kuphila ezintliziyweni zenu kwaye uya nendele nisekelwe eluthandweni.
Xa ufumana uYesu ngokholo, uYesu uza kuni, niphile entliziyweni yakho.
Waphendula uYesu wathi: "Ukuba nabani na uyandithanda, woligcina ilizwi lam, yaye uBawo uya kumthanda, ibe siya kuza kuye size sihlale lethu kunye naye."
UYesu ithatha up yokuhlala kwakhe kuwe. He ngokoqobo kungene kuwe yaye ubomi kuni. Yaye akayi kukushiya, ngaphandle kokuba ushiye kuye.
Kodwa ukuba uYesu kufuneka bakwazi ukuhlala kuwe, kufuneka amkele ngokuzithandela kwakhe. Yena ephazamisa kungekhona. UYesu a linene. Kodwa xa uvula intliziyo yakho kuye, Akamamkela xa engena kuwe!
Emva koko kwenzeka kuphela ummangaliso
Yinto xa uqala ukufumana uYesu entliziyweni yakho kwenzeka ummangaliso. Emva koko, intliziyo yakho yokomoya - ntle yakho yangaphakathi iinguqu ngokupheleleyo salungiswa. Ewe, uya kusindiswa. Le Ayikwazi nawuphi na umntu ukuba enze, ukufunda, okanye ibandla, kodwa kuphela uYesu Kristu!
Kanye njengoko namamkelayo uKristu Yesu iNkosi, ngoko bahlala kuyo,
IBhayibhile kucacile kakhulu ekufundiseni yayo. Ikuxelela ukuba ukwamkela uYesu njengeNkosi. Nabani na ayamkelwa uYesu lungagcineki. Ukuba nisindiswe kufuneka uyamamkela uYesu.
IBhayibhile ithi xa uthe wamvuma ngomlomo wakho ukuba uyiNkosi uYesu, wakholwa ngentliziyo yakho yaye uya kusindiswa. Umelwe wamvuma ukuba uYesu yiNkosi, wamkela njengeNkosi.
Oku kuyanceda ukuba ube nje lilungu lecawe, kufuneka kwakhona ukwamkela uYesu njengeNkosi.
Indoda beza ekhayeni lam xa phezulu apho iminyaka emininzi. Wayesiya kwiintlanganiso zethu kwaye ziya kusetyenziswa kakuhle. amalungu eCawa bamamkela evuyela ukuba eze. Kwaye ngoko ke zezo zinto. Babengazi ukuba indlela wayekunye ntle yakhe yokomoya. Kwaba kanye njengokuba ukuba sele bavakalelwa ukuba uya kusindiswa, ngoku ukuba kwiintlanganiso zethu. Kodwa ngenxa nje uye kwiintlanganiso ukuze oko akuthethi ukuba usindisiwe. Ngoko ke musa akucele.
Ndaqaphela ukuba kukho into kulungile nale ndoda ngoko ndacela ukuba bathi: "UYesu uyiNkosi yam," kodwa akabanga nako; kuba wasindiswa. Ngoko nagged kwaye nagged kuye ukuba kwakufuneka ukwamkela uYesu sivuma kuye yiNkosi ukuze basindiswe. Ewe, yena wavuka ebenomsindo kum onke undichukela, kodwa ekugqibeleni wanikela ngayo, bamkela uYesu wavuma uyiNkosi yabo - yaye ummangaliso kwaba iqiniso! Uya kusindiswa!
kweminyaka ethile ndadibana naye kwesinye isixeko yaye wavuya kangangokuba uye undichukela kuyo ukuba kwakufuneka ukwamkela uYesu basindiswe. Usindiso ummangaliso inamathele. Ithe ke yakuba ilondele liyalondolozwa yaye bahlala apho uYesu Krestu!
Xa lo mmangaliso? xa wamkela uYesu uyiNkosi yawo Kwathi!
IBhayibhile ithi ngokucacileyo ukuze usindiswe kufuneka uyamamkela uYesu!
Matthew 25:35 - kuba ndalamba, nandipha into esiwa phantsi kwempumlo. Ndanxanwa, nandiseza ukundinika. Ndandingowasemzini Nathwala nam.
Matthew 25:38 - Ke Sakubona nini na ungowasemzini yaye wasamkelayo, uhamba ze, ndikwambese?
Matthew 25:43 - ndandingowasemzini yaye akuzange wamkela mna, ze, nandambathisa, abagulayo kwaye entolongweni nandivelela na.?
Luke 9:53 - Kodwa abantu abazange Akamamkela, ngokuba yena wayesiya eYerusalem.
Luke 10:38 - Ngoxa babesendleleni, uYesu waya kwidolophana, nomfazi ogama linguMarta wamamkela ekhayeni lakhe.
Luke 19: 6 - uZakeyu Wakhawuleza phantsi wamamkela ngobubele, bevuya.
John 1:11 - Lowo weza oko empahleni yakhe, wabamkela abakhe nguye.
Yohane 1:12 - Ke bonke abamamkelayo wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo, abo ke bakholwayo kwigama lakhe.
John 4:45 - Xa wafikayo kwelaseGalili, abaseGalili wathabatha nxamnye naye, ngenxa yokuba ababezibonile zonke izinto awazenzayo eYerusalem emthendelekweni. waba khona bona ngokwabo emthendelekweni.?
Mateyu 18: 5 - Ke othe wamkela umntwana onje, egameni lam, wamkela mna.?
Marko 9:37 - "Othe wamkela noko amnye wabantwana abanje, lam, wamkela mna; nothe wamkela mna, akamkeli mna, wamkela lowo wandithumayo.."
? Luke 9:48 - .. Waza wathi kubo: "Othe wamamkela lo mntwana egameni lam, wamkela mna; nothe wamkela mna, wamkela lowo wandithumayo Lowo umncinane phakathi kwenu nonke, yena mkhulu. "?
John 5:43 - Mna ndize egameni lam nobukaYise, nina nisuka ningabamkeli kum. Kodwa nabani na egameni lakhe, uyithabathe.
John 13:20 - mna ndinixelela inyaniso; Lowo wamkela nabani na endithe ndamthuma, wamkela mna; nothe wamkela mna, wamkela lowo wandithumayo. "?
2 Korinte 11: 4 - Kuba, xa umntu ofikayo avakalisa omnye uYesu, esingamvakalisanga thina, nokuba namkela moya wumbi nokuba ziindaba ezilungileyo ezizimbi ngaphezu omnye kuni ngaphambili wafumana, ngoko ukuyamkela ngovuyo.
Efese 6:14 - Thatha isigcina-ntloko sosindiso, nalo ikrele loMoya, apho ilizwi likaThixo (Yesu).
Phezulu 22:17 - UMoya kunye nithi umtshakazi, "Yiza!" Kwaye eweva bathi, "Yiza!" Kwaye yonxano ezayo, kwaye abo bafuna ukuba ukhululekile ukuba amanzi obomi (Yesu).
Ekubeni kukho iingxelo ezininzi zeBhayibhile zihambisana ukwamkela uYesu, leyo, umzekelo, uthi ukuba "ilizwi wafumana", "balamkela yokucamagusha," njalo njalo.
IZenzo 2:41 - Abo abalamkele ilizwi lakhe ngovuyo, babhaptizwa; Yakhula ke inani labafundi ngaloo mini malunga namawaka amathathu.?
IZenzo 17:11 - Abantu balapho bona ngaphezu aseTesalonika. La wona alamkela ilizwi ngentumekelelo enkulu wabancina iZibhalo yonke imihla ukuze ubone ukuba yinyani.
1 Korinte 15: 1 - Bazalwana, Ndinga ke ndinganikhumbuza, ndiyanazisa iindaba ezilungileyo, ezo ndazishumayela kuni, nazamkelayo nokuzamkela, ukuba nimi.
IZenzo 22:18 - Ndabona ke, wathi kum, Khawuleza uze ushiye kamsinya eYerusalem; ngokuba apha abayi kubamkela ubungqina bakho ngam.
Marko 4:16 - Bona bahlwayelwayo ezindaweni ezilulwalwa ngabo nangoko balamkele ilizwi ngovuyo xa siwuve,
Marko 4:20 - Kodwa bona kuye imbewu iwela kumhlaba olungileyo, ukuba ngabantu abathe baliva ilizwi, balamkele kunye uxakathe iziqhamo, amashumi amathathu, omnye amashumi amathandathu, nomnye ikhulu. "?
Mark 6:11 - Ke ukuba ethile akawamkela okanye uphulaphule kuwe, uze uye apho, vuthululani uthuli oluphantsi kweenyawo zenu, kube bubungqina oko kubo. "?
Ziphawule 10:15 - mna ndinixelela inyaniso kuni: Nabani na ongabamkeliyo ubukumkani bukaThixo njengomntwana, akasayi kukha angene ".
UYohane 17: 8 - kuba ndininikile kuwo amazwi ondinike kum. Baye bona bawathabatha baqonda ngokwenyaniso ukuba ndaphuma kuwe; baze bakholwe ukuba wena wandithuma.?
IZenzo 8:14 - Xa abapostile beseYerusalem, ukuba abaseSamariya balamkele ilizwi likaThixo, bathuma uPetros noYohane.
IZenzo 11: 1 - The abapostile nabazalwana ababekwelakwaYuda beva ukuba nazo iintlanga zilamkele ilizwi likaThixo.
Rom 5:11 - Kodwa kuphela, nathi kwakholeka kuThixo ngayo iNkosi yethu uYesu Kristu, esamkele ngayo kalokunje uxolelaniso olo.?
Filipi 4: 9 - Oko zinto nazifundayo, nazamkela, naziva, nazibona kum, ukuba nizenze. Ke uThixo onika uxolo malube nani.?
Hebhere 6: 4 - Abo yakuba ifunyenwe ukukhanya, basiva isipho sasemazulwini, inxalenye bamkelwa uMoya oyiNgcwele
ISityhilelo 3: 3 - Khumbula ngoko ukuba utheni na ukwamkela kwakho, nokuva, babambelela nkqi kunye baguquke. Ukuba ngaba ukugcina kwakho, ndiya kuza njengesela, yaye akusayi kulazi ilixa endokufikela ngalo.
Xa ufumana uYesu uya kusindiswa aze zonke izono zakho zixolelwe. Ube ngumntwana kaThixo (Yohane 1:12), zonke izono zenu zixolelwe, ufumana ubomi obungunaphakade nezulu iya kuba ilizwe lakho.
EBhayibhileni kukho imizekelo emininzi yendlela abantu ezifunyenweyo uYesu. UZakeyu akazange, umzekelo, ufumana uYesu ngovuyo (Luka 19: 6).
"Le yimini kufike usindiso kule ndlu," watsho uYesu ziindinyana nje ezimbalwa kamva. UZakeyu Ngaloo basindiswe - asindiswe xa wamkela uYesu.
Ukuba ufuna ukwamkela uYesu, wosindiswa nomntwana kaThixo, ungabuza umthandazo kucetyisiwe ngasezantsi.
Lo mthandazo yindlela kwabanye ungaqondwa. Bathi ngephutha bakholelwa ukuba lo mthandazo elisindisa, kodwa ke uJesu asindisa!
Wena zigcinwa xa ufumana uYesu, yaye ukuba ungenza ntoni kule mthandazo:
Ndifumana ngoku kwaye siyavuma njengoko iNkosi yam kunye Frälsare.Jag bakholelwa ukuba uThixo wamvusa wena kwabafileyo.
I cela intethelelo zonke izono zam.
Enkosi ukuba mna ngoku frälst.Tack ukuba undixolele ke ndiyabulela kuwe, ukuba Ngoku ungumntwana kaThixo.
Imbi le umthandazo ngasentla?